Badhaasni Noobelii Nagaa MM Abiy Ahmad fudhatan akka irraa mulqamuuf IOLAn gaafatame – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBadhaasni Noobelii Nagaa MM Abiy Ahmad fudhatan akka irraa mulqamuuf IOLAn gaafatame
Waldaan Ogeessota Seeraa Oromoo Idila-Adunyaa Badhaasni Noobelii Nagaa bara 2019 MM Abiy Ahmad fudhatan akka irraa mulqamu gaafate.
(bbcafaanoromoo)–Waldaan kun xalayaa koree badhaasa Noobelii Nagaaf barreesseen bulchiinsi MM Abiy Ahmad ‘rakkoo nageenyaa hamaan kan guutameefi ajjeechaa gurguddaan keessatti raawwatamaa jirudha’ jechuun ibseera.
”Bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti tasgabbiin biyyaa dhabamaa dhufeera. Ajjeechaan namoota bebbekamoo dabalaa jira. Hidhaan namoota bulchiinsa isaa irratti qeeqa jajjabaa dhiyeessaniifi hoggantoota siyaasaa irratti himata jajjabaa banuun gochoota bulchiinsa isaa jalatti ibsamanidha. Filannoo yeroo hin beekamneef akka turu taasise,” kanneen jedhan xalayaa sana keessatti dubbii ijoo ibsaman keessaati.
Ogeettiin seeraa miseensa waldichaa keessaa tokko taateefi biyya Iswiizerlaandi jiraattu Dr Qabbanee Wadaajoo badhaasichi kan kennameef qabxiilee gurguddoo sadii irratti hundaa’uun tahuu koreen badhaasichaa ibsee ture jetti.
”Kan jalqabaa nageenya Itoophiyaafi Eertiraa gidduutti uumame. Kan 2ffaa biyya keessatti jalqabbii dimokiraasii babal’isuufi mirga namoomaa kabachiisuu jalqabamee turedha,” jechuun himti.
Dr Qabbaneen badhaasichaaf kan geessisan keessaa qabxii 3ffaan biyyoota ollaa kan akka Sudaaniifi Gaanfa Afrikaa keessatti nageenya buusuuf sochii Dr Abiy Ahmad taasisaa turan ilaalamuun tahuu himti. Haatahu malee, kun hundinuu akka abdatametti hin deemne jechuun ibsiti.
”Badhaasichi kan kennaameef waan hojjetaa turaniif galateeffamanii hojii manaa kana akka itti fufsiisaniif ture yaadni isaa. Garuu kun duubatti deebi’ee dimokiraasii babal’isuu, mirga namoomaa kabajuufi mirgi odeeffannoo bilisaan argachuu gaduma badaa adeeme.”
Dr. Qabbaneen Itoophiyaatti ajjeechaan adda addaa akka gaggeeffamu ibsuun, mootummaan garuu qorannoo qulqulluu taasisee tarkaanfii fudhatame waan uummataaf ibsaa jiruu hin mul’atu jechuun dubbatti.
”Dabalataan namoota karaa nagaa qabsoo taasisaniifi gaazexessitoota hidhuun akka waliigalaatti nu yaadesseera jechuun himti.
Ol-aantummaa seera kabachiisuu waan jedhu fudhatama kan qabu yoo qaamolee seeraa hunda irratti amanamummaan jiraatedha.”
Tarkaanfii amma fudhatamaa jiru ilaalchisee amanamummaan qaama seera baasuu, raawwachiisuufi hiiku irratti uumanni qabu gadi bu’aa waan taheef hanga kun odeeffannoo qulquluun hin deeggaramnetti namuma aangoo of harkaa qabutu maqaa seeraa fayyadamuun miidhaa geessisa jette Dr Qabbaneen.
Kanaaf, waldaan isaanii dhiibbaa taasisuuf xalayaa kana koree badhaasa Noobelii Nagaaf barreessuuf akka dirqames himteetti.
QABBANEE WADAAJOO Dr Qabbanee Wadaajoo
Hariiroo Itoophiyaafi Eertiraa
Dr Abiy Ahmad akka gara aangootti dhufaniin diinummaan waggoota 20 oliif Itoophiyaafi Ertiraa gidduu ture furuun biyyootni lamaan akka araaraman taasisuun lammiileen biyyoota lameenii akka wal argan jalqabbii gaariin mul’ateera.
Daangaan biyyoota lamaan gidduu cufamee tures banamuun firri waggoota hedduuf adda bahee ture akka wal argu taasifame. Biyyoota lameen gama dinagdeefi daldalaan walitti hidhuuf waadaa gurguddaanis galameera.
Itoophiyaanis waliigaltee Aljeers fudhachuun hojiitti hiikuufi loltoota daangaa Ertiraa keessaa baasuuf akka hojjettu ibsaa turte.
Haatahu malee, daangaan biyyoota lameenii banames deebi’ee cufamuun waliigalteen isaanii hedduun ammoo akka duubatti harkifatetu himama.
Dr Qabbaneen amma gaggeesitootni biyyoota lameenii daawwannaa waliin taasisuu irra kan darbe wanti ifatti beekamu hin jiru jetti.
Waliigalteen biyyoonni lameen waliif galan, daangaa irra maaltu tahaa jira kan jedhuufi hariiroo uummata biyyoota lameenii gidduu jiru ilaalchisee hanga odeeffannoo ifatti hin himamnetti kaayyoon badhaasichaas galma gaheera jennee hin ammannu jetti.
Badhaasni Noobelii kenname ni mulqamaa?
Namoota badhaasa Noobelii Nagaa kana mo’atan keessaa tokko dursituu biyya Mayinamaar Saan Suukiidha. Haleellaa musiliimota Rohingiyaa irratti biyyasheetti raawwatee namoota hedduu galaafatee kan biyyaa baase tasgabbeessuu hin dandeenye jedhamuun akka badhaasichi irraa mulqamu gaafatamaa ture.
Haatahuyyuu malee, kun gama koree badhaasicha kennuun hin raawwatamne. Dr Qabbanee Wadaajoos badhaasichi mulqamuu hin danda’u erga tahee maaliif xalayaa kana barreessuun isin barbaachise? gaaffii jedhuuf akka danbii isaaniitti badhaasichi kennamee akka hin fuudhamne ibsamuu beeka jedhan.
Korichi badhaasicha kan kennu waan hojjetamee darbeef malee kan fuulduratti hojjetamuuf akka itti hin gaafatamne danbii isaa keessatti ibsamee jira. Haatahu malee, waan tahu hundaa callisuu jechuu osoo hin taane hojii namni badhafame hojjetu jala bu’uun akka hordofan ibsaniiru jette.
”Kaayyoon xalayaa keenyaa badhaasichi haa mulqamuuf dhiisuu osoo hin taane koreen badhaasa kana kennu abdiifi galmi badhaasichi kennameef akka galma gahaa hin jirreefi xiyyeeffannoon itti kennamuuf.”
MM Abiy Ahimad erga aangoo qabatanii sarbama mirga namoomaa biyyicha keessatti waggoota kurnan lamaa oliif raawwatamaa turaniif dhiifama gaafatanii kanneen mana hidhaatti dararamaa turanis akka gadhiifaman taasisaniiru.
Gama mootummaan yakkoota sarba mirga namoomaa raawwatamaa turaniif dhiifama gaafatanii biyyichatti akka haaromsa fidan abdii kenanii ture.
Haatahu malee, bulchiinsa isaanii jalatti walitti bu’insa bakkaa bakkatti mudatu tasgabbeessuu dhadhabuufi sarbama mirga namoomaa gaggeeffamaa jiruun amma qeeqamaa jiru.
Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti Oromiyaafi naannoo Amaaraa keessatti raawwatamaa ture eeruunis dhiyeenya dhaabbanni mirgoota namoomaa Aminestii Internaashinaal gabaasa bal’aa baasuun ni yaadatama.
Dhiyeenya ammoo ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwateen booda naannoo Oromiyaafi magaalaa Finfinnee keessaatti namootni hookkara kaasan jedhaman hoggaantoota siyaasaa dabalatee namootni kumaatamaan to’annoo jala oolaa akka jiran mootummaan ibseera.
It’s impossible to stop this generation. ❤️💚❤️
Abbabaa Dhugaasaa New Afaan Oromoo Music “DIDI”2020